Xildhibaan caan ah oo ka badbaaday Qarax ka dhacay Muqdisho [Sawirro]
MUQDISHO, Soomaaliya - Mid kamid ah Xildhibaanada ugu caansan Baarlamaanka Soomaaliya, Daahir Amiin Jeesow ayaa maanta oo Talaado ah si dirqi ah uga badbaaday qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay Muqdisho.
Jeesow ayaa markii uu dhacayay qaraxa ku sugnaa goob uu ka dukaameysanayay oo ku taalla wadada Makka Al-Mukarama, gaar ahaan nawaaxiga Isgoyska Dabka maanta duhurkii.
Ugu yaraan labo ruux oo darawalka Xildhiabaanka kamid yahay ayaa ku dhaawacmay qaraxa oo ka dhashay bam lagu soo xiray Gaariga, kaaso oo qarxay xilli uu yaallay wadada qarkeeda.
Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa la doonayay in lagu dilo Xildhibaan Jeesow, oo katirsan Aqalka Hoose ee Baarlamanka Soomaaliya, balse Kooxda Al-Shabaab ayaa qaraxyada noocan ka fuliso Caasimadda.
Weerarkan ayaa dhacay 11 maalmood kadib markii saddex qarax oo ka dhacay Isgoyska KM-4 ay ku dhinteen in ka badan 50 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 100 kale.
Qaraxyadan ayaa dhacaya xilli wadooyinka Muqdisho ay joogaan ciidamo boolis ah, oo gaadiidka kala duwan ku baara Isgoysyda waaweyn.
Fahfaahinada hordhaca ah ayaa sheegaya in qaraxyada ay ahaayeen kuwa aad...
Qarax ka dhacay Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 15.09.2018. 10:02
Sarkaal ciidan oo Muqdisho lagu dilay iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 08.08.2018. 00:53
Qaraxyo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay Goofguduud
Soomaliya 13.03.2019. 13:06
Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Baardheere iyo wararkii ugu damabeeyay
Soomaliya 02.02.2019. 13:05